“हाइजिनिक, शुद्द सरसफाई अनि क्वालिटी युक्त खाना नै ओमको विशेषता” | bageshworipost.com
“हाइजिनिक, शुद्द सरसफाई अनि क्वालिटी युक्त खाना नै ओमको विशेषता”
होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायमा लामो समयसम्म काम गरेका तथा अनुभवी ब्यवस्थापकका रुपमा परिचित ब्यक्ति हुन धनश्याम शर्मा । होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायको चुनौती अवसर तथा वर्तमान अवस्थाका बारेमा बागेश्वरीपोष्ट डटकमका लागि राधा आचार्यले गरेका कुराकानीः
१.ओम रिसोर्ट एण्ड पार्टी प्यालेसको खास विशेषता के हो ?
सर्बप्रथम ओम रिसोर्ट एण्ड पार्टी प्यालेस राजमार्ग सग जोडिएको छ । शहरको मुटुमा छ, सबैलाई सहज भएको ठाउ सबै सुविधायुक्त छ।नया भए पनि पुरानो जस्तो भएको छ। गेस्टहरु ओममा पुग्दा नया स्टाफ भन्दा पनि चिनेका पुराना स्टाफहरु भेटिन्छन। त्यसमा म सग धेरै नजिक बाट चिनजान भएकाले पनि सबैलाई सजिलो भएको छ । बस्नको लागि ग्रहाकको चाहाना अनुशार सुविधायुक्त रेष्टुरेन्ट ,पार्टी हल, कटेज लगायात क्याबिनहरु साथै वाइफ़ाइ पार्किङ्ग र गार्डेन पनि छन् । खानामा हाजिनिक क्वालिटी सरसफाईमा बिशेष ध्यान दिएका छौ।गेस्टहरुको चाहना अनुशार खाना, पारिवारिक बाताबरण भएकाले ओमको बढी बिसेसता भएको हो ।
२.ग्राहकको सन्तुष्टिका लागि कुन कुन कुरामा ध्यान दिइरहनुभएको छ ?
हामि सर्बप्रथम त गेस्टको स्वागतमा बढी ध्यान राख्दछौ। खाना हाइजिनिक हुन्छ, शुद्द सरसफाई अनि क्वालिटी युक्त खाना दिन्छौ। बोलि ब्यबहार, ग्रहाक को के चाहाना छ ,हामी त्यसलाई नजिक बाट बुझ्ने गर्छौ। अर्को कुरा हामि कहा के कमि छ ? कुन स्थानमा सुधार गर्नु पर्ने छ ? हाम्रो मेनु अनुशारको खाना बनेको छ कि छैन ? अन्तिम मा गेस्टसग फिद ब्याक लिने पनि गर्छौ ।
३.कुशल व्यवस्थापन नभएर कतिपय होटल, रेष्टुरेन्टको व्यापार राम्रो हुँदैन, कति बन्द नै हुन्छन् । तपाईंहरु त भर्खर एक बर्षे यात्रामा हुनुहुन्छ ? यसको दिगोपनको लागि होटल व्यवस्थापनमा कसरी ध्यान दिइरहनुभएको छ ?
कुनै पनि ब्यबसाय चलाउदा वा संचानल गर्दा ब्यबस्थापन पक्ष सक्षम चाहिन्छ।धेरै जस्तो होटल ,रेष्टुरेन्टले के गल्ती गर्छन भने ग्रहाकको चाहिदो वा जायज मागलाई चाहिने कुराको सुझाबलाइ पनि यो पुरानो भनेर घमण्ड गर्छन ।एउटा ग्रहाक नै नआए के हुन्छ ,फिर्ता पठाइदिए के फरक पर्छ र भन्ने सोचले गर्दा धेरै होटल ,रेष्टुरेन्ट पछाडी परेको मेरो अनुमान छ।जति पुरानो स्टाफ बाट फाइदा लिने हो त्यो कुरा नया स्टाफ बाट लिन नसकिने हुनाले स्टाफको कुरा नसुन्दा स्टाफ बदलिरहने हुदा यसको प्रतक्ष असर होटल ,रेष्टुरेन्टलाइ परेको हुन्छ ।त्यसकारण म पुरानो स्टाफलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको छु, स्टाफको बिमा देखि धेरै नया किसिमले मिलाएको छु ।
४.आगामी योजनाहरु के छन् ?
हामी भर्खर शुरुवाती अवस्थामा छौ।अझै एक बर्ष पनि पुगेको छैन, तैपनि हामीले होटल बाटिका चलाएका छौ।अब तुरुन्तै बाटिकामा ठुलो हल तयार गर्दै छौ।जो नेपालगन्जको लागि आबश्यक रहेको छ ।अनि खजुरा १ नम्बरमा पनि शाखा बिस्तार गर्ने तयारीमा छौ।यसरी हामी देशको राजधानी लगायात अन्य प्रदेशहरुमा समेत ओमलाइ चिनाउने तयारीमा छौ।
५.अन्त्यमा सुभेच्छुक, शुभचिन्तक, ग्राहकहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो तर्फ बाट के भन्न चाहान्छु भने मैले बिगत २७ बर्ष देखि दिदै आएको सेवा अझै राम्रो ब्यबस्थित गर्दै ग्रहाकहरुले चाहे जस्तो शान्त बाताबरणमा सजिलो किसिमले भने जस्तो चाहे जस्तो नया परिकारको स्वाद दिन पाउ ।यसरि सधै ग्राहाक सग प्रतक्ष घुलमिल भएर काम गर्न पाउ । साथै हामीलाई माया गर्ने सबै हाम्रा पाहुनाहरु सधै उहाहरुले चाहे भन्दा राम्रो परिकार,नया स्वाद दिन पाइराखौ भन्ने सोच मा हिडेका छौ।